Banyere Anyị - Zhejiang Yuking Technology Co., Ltd
Zhejiang Yuking Technology Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa na ekspootu nke nchegbu banyere imewe, mmepe na mmepụta nke Auto Air Conditioning Compressor, na ụfọdụ yiri Auto A / C Parts. All nke anyị na-soro mba àgwà ụkpụrụ na na-ekele dị ukwuu maka na a dịgasị iche iche nke ahịa n'ụwa nile.
Anyị ọma onwem ụlọ ọrụ na ndị magburu onwe àgwà akara ofụri niile nkebi nke mmepụta na-enyere anyị na-ekwe nkwa ngụkọta ahịa afọ ojuju. Anyị na-enye mụ na dịgasị iche iche nke Auto A / C Compressor na Auto A / C akụkụ na obi anyị niile. Dị ka a n'ihi nke elu àgwà ngwaahịa na pụtara ìhè ahịa ọrụ, anyị ngwaahịa na-ama na mbupụ North America, South America, South-East Asia, Middle-East ndị ọzọ yiri mba.
Anyị na-esi ọnwụ na "Magburu onwe Quality, Ezi Trust, na zuru okè Service". Echegbula onwe unu banyere ndị ahịa si na-echegbu onwe, chere na ndị ahịa echiche, na-enyere ndị ahịa mkpa. Anyị na-ewetara akụ na ụba ụwa na-azụ ahịa. Ezi obi na-atụ anya ka nwere a ogologo oge imekọ ihe ọnụ na mmepe na-niile ahịa. Mmadụ Bịa ọ bụla enyi ịkpọtụrụ anyị!